Mahajanga: Nanatevina fahaiza-manao hiatrehana fifidianana ny mpanao gazety
Miatrika fampiofanana sy fifampizarana fahaiza-manao hisorohana ny hetraketraka ara-pifidianana eny amin'ny Les Roches Rouges ny mpanao Gazety avy amin'ny haino amanjery avy eto amin'ny faritra Boeny sy ireo faritra manodidina azy.
Ny tetikasa PEV Madagascar no mamatsy vola ny hetsika izay mitety faritany. Tao Antananarivo no nanombohana azy ny volana mey teo ka izao no anjaran'i Mahajanga ary ho any Fianarantsoa avy eo.
Tanjona amin'izao fifampizarana traikefa sy fampiofanana mpanao gazety izao ny hampitomboana ny fahaiza-manaon'ny tsirairay amin'ny fomba fiasa mandritra ny fitrandrahana, fikirakirana ary famoaham-baovao mahakasika ny fifidianana, hisorohana ny disadisa sy ny herisetra izay misy fiantraikany amin'ireo mpisehatra mandray anjara sy ny voka-pifidianana.
Nahaliana ny rehetra ny fampiofanana nandritra ny andro voalohany ary nangatahan'ny rehetra ihany koa ny hisian'ny atrikasa hihaonana amin'ny CENI ahafahana mifanaraka amin'ny mety ho endriky ny fiaraha-miasan'ny roa tonta.
Ny zoma 6 jolay vao hifarana ny atrikasa.